Ciidamada Koonfur Galbeed iyo maleeshiyada Mukhtaar Roobow oo iska difaacay weerar Al-Shabaab ay soo qaaday | RBC Radio
Ciidamada Koonfur Galbeed iyo maleeshiyada Mukhtaar Roobow oo iska difaacay weerar Al-Shabaab ay soo qaaday
Posted on August 12, 2017 Raad Raaca, RBC, Wararka, Warbixin
Muqdisho (RBC Radio) Wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in ciidan gurmad ah oo ay direen masuuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo maleeshiyada Mukhtaar Roobow ay ku sugan yihiin deegaanka Abal oo ka tirsan gobolka Bakool kadib markii dagaal culus maalmihii la soo dhaafay uu ka dhacay deegaankaasi.
Dagaalka ayaa u dhexeeyay maleeshiyaadka Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday deegaanka Abal ee gobolka Bakool, halkaasoo mudo dheer ay ku dhuumanayeen Mukhtaar Roobow iyo maleeshiyaad ku heyb ah.
Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday Mukhtaar Roobow iyo maleeshiyadiisa kadib markii ay soo bexeen wararka sheegaya in wadaadka laga saaray liiska kooxaha argagixisada Mareykanka iyo Qaramada Midoobay, ayna suurtagal tahay inuu heshiis la galo Dawlada Federaalka Soomaaliya.
Sarkaal ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Maxamed Cusmaan ayaa xaqiijiyay in maleeshiyada Roobow iyo ciidankii Koonfur Galbeed uga yimid ay iska difaaceen Al-Shabaab, isla markaana xaalada deegaanka lagu dagaalamay ay hadda tahay mid deggan.
Waxaa jira khasaare ka dhashay dagaalka saddexdii maalmood la soo dhaafay ka socday dhul buuraley iyo hawd ah oo ku yaalla duleedka tuulada Abal, hase yeeshee ma jirto ilo madax bannaan oo cadeyn kara inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha illaa hadda.
Mukhtaar Roobow ayaa wajahaya halis kaga imaaneysa dhanka Al-Shabaab, iyadoo ay muuqato inuu gaabis yahay wada hadalkii uu kula jiray maamulka Koonfur Galbeed iyo Dawlada Soomaaliya oo haddii uu guuleysan lahaa wada xaajoodka ay suurtagal ka dhigi lahayd inuu hawdka ka soo baxo oo uu yimaado magaalooyinka Muqdisho ama Baydhabo.